Archive du 20171218
Tra-doza ny tafika nalefa tany Ikongo 9 natelin’ny rano, razana 3 no hita
Efa ny zoma 15 novambra no niandry ny rano hidina ireo fiaran’ny mpitandro ny filaminana nihazo an’Ikongo, hampandry tany any an-toerana noho ny fahavakisan’ny fonja ny alarobia 13 desambra lasa teo.
Marc Ravalomanana « Haintsika ny mampidina io vidim-bary io »
Ankoatra ny fanatrehany ny fanompoam-pivavahana fankalazana ny faha-150 taona niorenan’ny fiangonana Loterana Malagasy sy ny faha-500 taonan’ny Reformasiona tao Ambohitsimanova Betafo omaly alahady,
Hery Rajaonarimampianina Tsy nahazo olona tany Toliara
Mirifatra tsy tana intsony ny filoham-pirenena amin’ny propagandy mialoha ny fotoana sarontsaronana amin’ny fitokanana zava-bita na fametrahana vato fehizoro fanombohana asa.
Rina Andriamandavy VII sy Claudine R Tsy misy ilan-dRajaonarimampianina azy ireo intsony ?
Nanahiran-tsaina ny filoha Hery Rajaonarimampianina mivady ny nafitsok’i Claudine Razaimamonjy sy ny Loholona Riana Andriamandavy VII.
Hand ball – Tompondakan’i Madagasikara Nahery ny As Tsiky vehivavy sy ny Assm lehilahy
Nifarana omaly alahady 17 desambra tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2017 eo amin’ny taranja hand ball “senior” lahy sy vavy.
Azafady Mba firy moa ilay taxibe mankeny iavoloha ? Fa Mba te ho tafiara-dalana amin’Andriamatoa filoha Misy tiana ambara manko, momba ny eto an-tanàna Ka Mba omeo re ny laharan'ilay fiara.
Bokin’andraikitra hifehy ny fitaterana Neken’ny Taxi Ville sy ny CUA
Tontosa sabotsy teo ny fihaonan’ny mpisehatra amin’ny mpitatitra fiarakaretsaka sy ny tompon’andraikitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) tao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely.
Tsena COUM 67 HA Nalana tamin’ny toerany ny lehiben’ny tsena
Niravona ihany koa ny olana eo anivon’ny tsenan’ny Coum 67 ha taorian’ny nandraisan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny andraikiny.
Fakana entana azo aloha tsikelikely Mitombo isan-taona ireo manao azy
Ny vanim-potoanan’ny fety tahaka izao no mba hany andro iray toa zaton’ny fianakaviana Malagasy hanatsarana sy hanovana endrika ny ao an-tokantrano.
Fiarahamiasan’ny Airtel sy Rotary Ankizy 400 mahery nahazo kopia mari-pahaterahana
Ankizy mihoatra ny 400 monina ao amin’ny Fokontany Ankorondrano no notoloran’ny orinasam-pifandraisana Airtel sy ny fikambanana Rotary Club Ankorondrano kopia mari-pahaterahana ny Sabotsy teo taorian’ny fidinana ifotony notanterahin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany teny an-toerana.
Temple de Pierre Mizael Kung Fu Vita ny Gymnase goavana
Notokanana ny sabotsy lasa teo ny Gymnase lehibe ao anatin’ny Temple de Pierre Mizael Kung Fu eny Ambatomirahavavy ; ampahany voalohany amin’ny asa goavana fanamby napetraky ny Grand Maite Avoko izay zanaka lahin’ny Grand Maitre Pierre Mizael (Pierre Be) ity vita ity.
Kitra Vakinankaratra Niova ny mpitantana
Nizotra tam-pilaminana ny fifidianana filohan’ny Ligy ho an’ny taranja baolina kitra tany Vakinankaratra ka Atoa Andriantomponera Fidinirina indray no voafidy ho filoha, nandimby an'Atoa Rakotoasimbola José,
Seksion’ny rugby Atsimondrano Tontosa ny 1/8-ndalan’ny D-1 communale
Tontosa omaly alahady 17 desambra teny amin’ny kianjan’ny Makis teny Andohatapenaka ireo lalao 1/8-ndalan’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny « D-1 communale » fiantso ny D-1 elite II fahiny.
Mpanelanelana sa mpanakorontana ?
Tsy mbola misy tokotaniny hatramin’izao ny tetiandrom-pifidianana kanefa andro vitsy sisa dia hatao veloma ity taona 2017 ity ary hiditra ao anatin’ilay antsoina hoe taom-pifidianana amin’izao isika.
Saran-dalana – Zotra nasionaly Tsy hisy fiakarana na dia fety aza
Mampitaraina ny maro hatrany rehefa ankatoky ny fetin’ny noely sy ny faran’ny taona tahaka izao ny fampiakarana saran-dalana ataon’ireo mpitatitra sy ny tsy fahampian’ny fiara mpitatitra.
Antenimieran’ny Varotra sy Indostria Toamasina Lasan’ny “GEPAT” avokoa ny toerana 30
Natao ny zoma tontolo ny andro teo ny fifidianana ireo mambra miisa 30 eo anivon’ny antenimieran’ny varotra sy ny indostria atsinanana, izay ahitana kolejy telo dia ny varotra sy ny indostria ary ny servisy. Lisitra kandida tokana izay notarihan’ny “GEPAT”
Ladies’Circle N°6 Nanampy ireo ankizy sahirana teny amin’ny EPP Alarobia
« Fifankatiavana sy fifanampiana » no teny filamatry ny fikambanana Ladies’Circle Madagascar (LCM). Ho fanatanterahana izany indrindra no nahatonga ny Ladies’Circle N°6 (LC6) zana-tsampana ao anatiny nanolotra fanomezana ho an’ireo ankizy sahirana teny amin’ny EPP Alarobia ny sabotsy teo.
Zandarimariam-pirenena Nodimandry ny jeneraly Randrianazary
Nodimandry ny alahady 17 desambra tamin’ny 4 ora sasany maraina noho ny homamiadan’ny avokavoka ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena teo aloha, ny jeneraly Randrianazary.
Savorovoro tany Ikongo “Be loatra ny fanaratsiana ahy”, hoy ny depiote Brunel
Tsy manan-kolazaina firy aho manoloana ny vaovao aely any an-drenivohitra izay tsy mifanaraka amin’ny tena zava-niseho marina taty Ikongo, hoy ny depiote Razafitsiandraofa Brunel tamin’ny antso an-tariby nifanaovana taminy.
Behoririka Mirongatra ny fanatahana paoketra
Aleo mailomailo ihany rehefa eny an-tsena amin’izao ankatoky ny fety izao satria mba mifangaro amin’ny besinimaro eny ihany koa ary tena tsy ampoizina ny mpanao sintomahery sy mpangarompasoy ary mpanataka poketra.
Ady amin’ny polisy sandoka Miantso fiaraha-miasa amin’ny vahoaka ny polisim-pirenena
Niteraka resabe teto amintsika ihany koa tato ho ato, indrindra amin’izao ankatoky ny fety izao ny fisian’ireo mpitandro ny filaminana sandoka miditra anaty taxi-be ka manendaka sy mampahory mpandeha.
Antanananarivo Manomboka mihena ny vaky trano
Efa nilaza ny avy ao amin’ny polisim-pirenena ho an’ny eto an-drenivohitra sy ny zandarimariam-pirenena ho an’ireo faritra manodidina an’Antananarivo fa misy ny hetsika efa natao ,
Fanatsarana ny filaminam-bahoaka Nanome solika ny polisy ny fikambanana MMA
“Tsapanay ny ezaka goavana ataon’ny polisim-pirenena eto Toamasina amin’ireo vokatra azon’izy ireo, sy ny fanamby ataony amin’ny fametrahana filaminam-bahoaka hatramin’izay, koa amin’ny maha-fikambanana tanora Malagasy Mandray Andraikitra anay dia mahatsapa izany fa ilaina ny fifanohanana amin’izy ireo ho antoky ny filaminam-bahoaka amin’izao ankatroky ny fety izao”,
ZAZA VERY AMBOHITSOA
Nikoropaka omaly ny mpiara-monina tetsy Ambohitsoa vokatry ny fahaverezan'ny zazakely iray izay nentin'ny mpiasany. Nokarohina erak'Antananarivo kanefa tsy hita. Nampandrenesina ny polisy ary naparitaka tamin'ny tambajotra sosialy ny sary. Ny hariva dia nody ilay mpiasa, toa ny tsy nisy na inona na inona, avy nampiaraka ary nentiny ilay zaza. Noroasina avy hatrany.
Analamanga Rugby Tsy hiala aho, hoy Andry La Pie
Lavon’ny Tfma Ankasina tamin’ny isa 13 – 9 ny Tam Anosibe omaly alahady 17 desambra teo amin’ny manasa-dalan’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga rugby tetsy amin’ny kianjan’i Malacam Antenimena.